नेपाली कांग्रेसलाई नै भोट किन? - सेतो गुरास
सेतोगुँरास Thursday, November 16, 2017
आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनले मुलुक तातेको छ। यसै सन्दर्भमा आफ्नो पार्टीलाई नै किन मतदान भन्ने विषयमा हामीले विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूलाई सोधेका थियौं, ७ मिनेट भित्र भन्नुहोस्- तपाईँको पार्टीलाई किन मत दिने? यस अन्तर्गत आज कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिको जवाफ -नेपाली कांग्रेसलाई किन मतदान ?
तैपनि म काग्रेसमा नै किन छु त? यसैसँग टाँसिएर किन बसेको छु त? के त्यस्तो कुरा छ जुन अरू पार्टीमा छैन्?
यो प्रश्नको उत्तर म दिनको लागि बसेको होइन। यस प्रश्नले सधैं म आफैंलाई घचघचाउँछ।
मुलुकमा यत्रा पार्टी छन्। पद नै चाहिएको भए आफ्नै पार्टी बनाए भयो। आफैं अध्यक्ष भएर कतिपय नेताले पार्टी खोलेका छन्। तर मैले कहिले कुनै पदका लागि पार्टी भित्र र पार्टी बाहिर कुनै कुरा गरेको छैन।
तैपनि मेरो निष्ठा कांग्रेसमा छ। किन?
बाहिर र भित्रको वृतान्त, निसंकोच र वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरेकाले भन्छु नेपालमा भएका अन्य पार्टीभन्दा कम खराब नेपाली कांग्रेस हो। त्यो कम खराबी नेपाली कांग्रेसमा म एउटा खराबी व्यक्ति भए पनि विगत ५० वर्षदेखि स–सम्मान बस्न पाएको छु। त्यसैले आदरणीय मतदाताहरुसँग म नेपाली कांग्रेसका लागि भोट माग्दछु।